Goodax Barre oo mar kale ku hanjabay in Dowladdu leedahay awood ay saacad kasta ku joojin karto isticmaalka baraha bulshada | YoobsanNews.com
Goodax Barre oo mar kale ku hanjabay in Dowladdu leedahay awood ay saacad kasta ku joojin karto isticmaalka baraha bulshada
(Yoobsannes Online) Wasiirka wasaaradda waxbarashada DFS ayaa sheegay in dowladdu ay awoodi karto in ay joojiso isticmaalka baraha bulshada [social media] xilliga lagu jiro imtixaanaadka heerarkooda kala duwan.
Goodax wuxuu ku nuuxnuuxsaday in wasaaradiisu u gudbisay Maxkamadda sare ee dalka dalab ay ku codsaneyso joojinta isticmaalka baraha bulshada haddii loo arko in ay jirto qatar lagu waxyeeleynayo habsami u socodka imtixaanaadka.
“Waxaan damaanad qaada buuxda ka haysanaa maxkamadda sare, waxaanna inoo qorsheysan mar walba oo aan qatar aragno inaan xiri karno baraha bulshada, ilaa hadda ma jirto wax qatar ah” Ayuu yiri Wasiir Goodax.
Hadalka wasiirka ayaa ka dambeeyey markii lagu arkay baraha bulsho qoraalo lagu sheegay in ay yihiin “qish-ka” imtixaanaadka maanta loo balansanaa, inkastoo aysan jirin caddeymo rasmi ah oo muujinaya run-ahaanshiyaha waraaqahaasi.
Previous: Jilaa u diga-rogtay siyaasi
Next: Guddoomiye ku xigeenka G/Banaadir oo si rasmi ah u shaqa billaabay